ဘာလို့ တစ်ချိန်လုံး ပင်ပန်းပြီး အိပ်ချင်နေရတာလဲ – Live the Dream
ကဲကဲ ကာလနဂါး ဝင်စားသလား ထင်ရအောင် ဘယ်လောက်အိပ်အိပ် တစ်ချိန်လုံး အိပ်ချင်နေတဲ့ လူငယ်လေးတွေ ရှိကြလား။ အိပ်ချိန်ကလည်း လုံလောက်ပါတယ်၊ အိပ်ရေးလည်း ဝတယ် ဒါပေမယ့် လူက မလန်းနိုင်ဘဲ ပင်ပန်း နွမ်းချိနေပြီးတော့ အမြဲလိုလို အာသမ်းနေတတ်တာ ဘာလို့များပါလိမ့်။ အိမ်က ရွှေမေမေတို့လည်း “နင်ဟာလေ တစ်ချိန်လုံး အိပ်ဖို့ပဲ သိတယ်” ဆိုပြီး ခနခနအော်နေပြီ။ စာမေးပွဲကလည်း ရှိသေး စာကြိုးစားကျက်ချင် ပါတယ်ဆိုနေမှ အိပ်ပဲ အိပ်ချင်နေတယ် ဒိုးခပဲ။ အင်းးး ဒီလိုလေးတွေ ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ ကာလနဂါး ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘဲ ဒီလို အကြောင်းအရင်းလေးတွေ ကြောင့်ပါနော်။
အမလေး အိပ်တာပဲ ဘယ်လိုအိပ်အိပ်ပေါ့ ဆိုရင် နိုးပါနော်။ ကြိုက်သလို အိပ်လို့ရတာတော့ မှန်ပေမယ့် ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အိပ်တဲ့ပုံစံ အဆင်မပြေရင် ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ လှပနိုင်ဖို့ သိပ်မသေချာပါဘူး။ ဥပမာ ပြောရရင် မနက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ လည်ပင်းကြီးနာပြီး ဟိုဘက်လှည့်မရ၊ ဒီဘက် ကြည့်မရနဲ့ ဒုက္ခရောက်ဖူးကြတယ်မလား အဲလိုပဲပေါ့။ အိပ်တဲ့အနေအထား မမှန်ရင် ဟောက်တာတွေ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ် ကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေ၊ ခေါင်းကိုက်တာတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ အိပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်နေမှသာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နိုင်ပြီး အိပ်ရေးဝမှာပါနော်။ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေကတော့ ပက်လက်အိပ်တာက အကောင်းဆုံးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အဖြစ်ဆုံး အနေအထား တွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညဘက်တွေမှာလည်း အိပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ဂရုစိုက်ပေးပါနော်။
အစားအစာရဲ့ တန်ခိုးကြီးမားပုံကိုတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စာဖွဲ့ပြနေစရာတောင် မလိုပါဘူး နေ့လည်ဘက် ထမင်းလေးများ စားပြီးသွားလို့ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက်နေရင် မျက်လုံးလေးစင်းပြီး အိပ်ချင်စိတ် ထိန်းမရတာ အရှင်းဆုံး ဥပမာပဲ မဟုတ်ပါလား။ စားစရာတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုက မြန်တာမို့လို့ အထူးသဖြင့် အရေးကြီး ကိစ္စ ရှိတဲ့ ရက်တွေ၊ စာမေးပွဲဖြေရတဲ့ အချိန်တွေဆိုရင် ပိုတောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေ၊ snacks စားလွန်းတာတွေ၊ ကော်ဖီအလွန်အကျွံသောက်တာ၊ အားဖြည့်အချိုရည်တွေ အများကြီး သောက်တာတွေက လုံး၀ မကောင်းပါဘူးနော်။ ဒါတွေက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း မသင့်တော်တာမို့ ရှောင်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မဟုတ်ရင် တစ်နေကုန် ခန္ဓာကိုယ်ကြီး လေးပြီး မထချင်၊ မသွားချင်နဲ့ အိပ်ချင်သလိုလို ပင်ပန်းသလိုလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
၃. ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှု
သေချာတာပေါ့ ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုမရှိမှတော့ ဘယ်လိုများ လန်းဆန်းတက်ကြွနိုင်ပါဦးမလဲနော်။ တစ်နေကုန် ရုံးမှာ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းမှာ ထိုင်နေတာ၊ တစ်ချိန်လုံး တီဗီထိုင်ကြည့် ဖုန်းပွတ်နေတာ၊ စားလိုက် အိပ်လိုက် အဲလိုမျိုး ဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာတွေ၊ အိပ်ချင်တာတွေ၊ ခေါင်းထဲ မကြည်မလင် မလန်းမဆန်း ဖြစ်တာတွေနဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးရတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် ထိုင်နေတာချည်း မဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်လေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေး နေပေးပါ။ အိမ်မှာဆိုရင် အိမ်အလုပ် လုပ်တာမျိုးတွေ၊ ရုံးမှာဆို ခနလောက် လမ်းလျှောက်တာမျိုး အကြောဆန့်ပေးတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းမှာဆို အားလပ်ချိန်တိုင်းလေး လှုပ်ရှားပေးတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်နော်။ တကယ်လို့များ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ အဲလို လှုပ်ရှားမှုလေးရှိမှ သွေးလည်ပတ်မှုလည်း ကောင်းမွန်ပြီး လူလည်း လန်းဆန်း၊ စိတ်လည်း နိုးကြားလာမှာပါ။
၄. Screen တွေ အကြည့်များလွန်းတာ
စာကျက်တဲ့အခါ အိပ်ချင်နေလို့ မျက်လုံးကျယ်သွားအောင်ဆိုပြီး ဖုန်းမပွတ်ပါနဲ့နော် မျက်လုံးမကျယ်တဲ့အပြင် စာကိုပါ လုံးဝမေ့သွားလိမ့်မယ်။ အဲဒါထက်စာရင် မျက်နှာသစ်ပေးတာ၊ ခနလမ်းလျှောက်တာ၊ အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ထိတွေ့တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ ဖုန်း၊ တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ အဲလို screen တွေ ကြည့်တာများလွန်းရင် မျက်လုံးတွေ ညောင်းပြီး လူကို မလန်းမဆန်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဖုန်းပွတ်တာ အရမ်းကြာသွားရင် ခေါင်းထဲ မူးနောက်သလိုလို၊ မေ့လဲတော့မလိုလို၊ ခန္ဓာကိုယ်တွေ နာနေသလို ခံစားရတာ သိကြမှာပါ။ မျက်လုံးညောင်းသွားတော့ ပျင်းတယ်ဆိုပြီး ဖုန်းကိုချ၊ ငါးမိနစ် မကြာဘူး ပျင်းတယ်ဆိုပြီး ဖုန်းကြည့်ပြန်ရော အဲလိုနဲ့ စိတ်လည်း မကြည်၊ လူလည်း မလန်း ပင်ပန်းပြီး အိပ်ချင်သလိုလို ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် screen တွေကြည့်တာကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ကြည့်ပါနော်။
၅. စိတ်ညစ်စရာ များလွန်းရင်
ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်မှု ရှိပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ များလွန်းတာမျိုး၊ စိတ်ပူပန်စရာ များလွန်းတာမျိုး၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေတာမျိုးဆိုရင်လည်း ဘာမှလုပ်ချင် ကိုင်ချင်စိတ် မရှိဘဲ တစ်နေကုန် နွမ်းလျနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးက ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်တာမို့ ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ လူတိုင်းမှာတော့ စိတ်ပင်ပန်းစရာ ပြဿနာမျိုးစုံ ဖြစ်တတ်ကြတာ မှန်ပေမယ့် စိတ်ပူပန်လွန်းရင် မကောင်းပါဘူးနော်။ အထူးသဖြင့် စာမေးပွဲတွေ ဘာတွေနီးရင် စိတ်တွေ အရမ်းပူပြီး စာက ကျက်သလောက်မရနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တတ်တာမို့ စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ ပူပန်စရာတွေကို ခေါင်းအေးအေးထားပြီး ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုပူပန်စရာ သိပ်မရှိတော့ရင် ရင်ထဲပေါ့ပြီး လူလည်း လန်းဆန်းတက်ကြွလာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အိပ်ရေးဝပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘာလို့ မလန်းဆန်းဘဲ အမြဲ အိပ်ချင်နေတာလဲ ဆိုတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်က အိပ်ရေးဝတာ မဟုတ်ဘဲ အလွန်အကျွံ အိပ်မိသွားတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး အိပ်လိုက်မိတဲ့အခါ လူက လုံးဝမလန်းနိုင်တော့ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း နွမ်းပြီး အမြဲ အာသမ်းနေတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ နေ့ခင်း တစ်ရေးတစ်မော အိပ်လို့ ညနေစောင်းထိ အိပ်မိသွားတဲ့အခါ တစ်ညနေလုံး အိပ်ချင်နေပြီး ထမင်းစားလို့လည်း မကောင်း ဖြစ်သွားရတာပါပဲ။ အိပ်ရေးဝတာတော့ ကောင်းပေမယ့် တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုသလို အလွန်အကျွံ အိပ်တာကတော့ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဆိုတော့ အိပ်ရေးဝအောင် ဆိုပြီး အလွန်အကျွံတွေ မအိပ်ပါနဲ့ ဒါက အထောက်အကူ မဖြစ်တဲ့အပြင် အိပ်ချင်တဲ့စိတ်၊ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်တာတွေကို ပိုပြီး ဖြစ်စေမှာပါ။
၇. ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာ
ဒီလိုဖြစ်ရတာမျိုးက အပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ရှိနေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သကြားဓာတ် နည်းပါးတာ၊ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တာ၊ သံဓာတ် ချို့တဲ့တာ မျိုးတွေဆိုရင်လည်း ဒီလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တခြား ပြဿနာတွေလည်း အများကြီး ရှိသေးတာမို့ မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့များ ဒီလိုဖြစ်တာ အချိန်တော်တော်ကြာ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကြည့်တာတို့ လုပ်သင့်ပါတယ်နော်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရှုံးတော့ မရှိဘူးလေ။ အဓိက က ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အာဟာရ ပြည့်ဝမျှတအောင် စားပြီး ရေလည်း များများသောက်ပေးပါ။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာလေလေ ကောင်းလေလေပဲမို့ “ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး ငါက သန်မာပါတယ်” ဆိုပြီး မပေါ့ပါနဲ့နော်။
တစ်ချို့တွေက “ဟာ တစ်နေကုန် အိပ်ချင်နေတယ် ဘာများဖြစ်တာလဲ မသိဘူး” ဆိုပြီး လူကတော့ ဘယ်မှလည်း မသွားချင်၊ ထလည်း မထချင်၊ အိပ်ယာကို အရမ်းချစ်နေတဲ့ ငပျင်းလေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ငပျင်းလေးတွေ တကယ်ရှိတယ်နော် ကိုယ်လည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာ ပြောလို့မရဘူး။ ပျင်းတဲ့အချိန်ကျ တစ်ချိန်လုံး အိပ်ပဲ အိပ်ချင်နေတာ သိကြတယ်မလား။ တစ်ခါတစ်လေ အပျင်းရောဂါက နည်းနည်း အားကြီးသွားရင် ဒီလိုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့နော်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေချာ ပြန်စစ်ဆေး ကြည့်ပါ။ တခြားပြဿနာ အကြောင်းအရင်းကြောင့် ဖြစ်တာလား၊ ကိုယ်ပျင်းလွန်းလို့ ဖြစ်နေတာလား ဆိုတာကိုပေါ့။ အပျင်းရောဂါကြောင့်သာ ဆိုရင်တော့ တိုက်ပွဲက နည်းနည်း ကြမ်းသွားပါပြီ အစွမ်းကုန် ရှိသမျှ အတွင်းအားတွေ အကုန်ထုတ်သုံးပြီး တိုက်ထုတ်ရတော့မှာပါနော်။
တစ်နေကုန် အိပ်ချင်နေရတဲ့ ပြဿနာအတွက် ရှားလော့ဟုမ်း မဟုတ်တဲ့ မင်မင်ဟုမ်းက အဖြေရှာပေးပြီးသွားပြီ ဆိုတော့ ဒီလိုဖြစ်လို့ ဒုက္ခရောက်နေသူလေးတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ သိသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေလည်း ရှိတာမို့ သိတဲ့အထဲက မျှဝေပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ နေ့ရက်တိုင်း လန်းဆန်းတက်ကြွနိုင်ကြပါစေ။
#nutrition & food